musha » Featured » CHIKAMU CHEZVIRI KWEVANHU VIDEO MITARIDZO YOKWADZIRWA PANE 2019 NAB SHOW
- Kuwedzerwa kubatana kusanganisira mapepa pa NAB Ratidza New York -
WASHINGTON, DC - The Travel Video Awards (TVAs) ichadzokidzwa zvakare NAB Ratidza musi waApril 9 muLas Vegas. Gadzirwa na Citizine Networks, Inc., zvikomborero zvinokurudzira uye zvinokurudzira mavhidhiyo ekufambisa akabudiswa mu2018 nevanomirira mafirimu vakazvimiririra, makambani ekufambisa, makambani ezveshau uye mararamiro emararamiro.
NAB Ratidza inokwevera pedyo ne100,000 mhizha, varaidzo uye teknolojia vadzidzisi vanobva kumativi ose enyika uye vachashanda zvakare semupiriri wepo anopa purogiramu. NAB Ratidza ichaitwa muna April 6-11 paLas Vegas Convention Center.
VVV vanoziva zvakasiyana-siyana zvema cinematic uye nekucheka-divi yemavhidhiyo yemavhidhiyo mukati memitambo miviri. Mipiro yemari yekuzvipira ichazivikanwa mukati maro Independent Track. Mirairo kubva kumabhizimisi ekufambisa, mararamiro emararamiro uye makambani ezveshupfumi achaonekwa mune Industry Track. Vanokunda kubva mumugwagwa mumwe nomumwe vachagamuchira zvakasiyana nemikomborero. Uyezve, vakakunda Mutambo waNomad uye VaAperence Awards vaviri vachawana mari yemari.
"Gore rapera reVideo Vhidhiyo Awards yaisanganisira zvinyorwa zve 400 kubva kunyika dze26 kumativi ose enyika," akadaro Citizine Founder uye CEO Philip DeBevoise. "Tinotarisira kuvaka chibudi ichocho ku2019 NAB Ratidza uye kushamwaridzana nekufambisa nhepfenyuro uye vhidhiyo vashandi pamwe nemakambani pavanouya NAB Ratidza New York. "
Citizine ichauya Simba reVhidhiyo mu $ 1 Trillion Travel Industry musi waOctober 17 sechikamu che2018 NAB Ratidza New York purogiramu yemusangano. Chikamu chichaongorora kuitika kwevhidhiyo pavanoshandisa kushandisa mari yekushandisa uye kuti vateereri vemafirimu, vatapi venhepfenyuro, vashandi uye vanopikisa vanogona kukudziridza nekugadzirisa zvinyorwa zvavo. Kutevera musangano, Citizine inobata a networking reception apo vanoenda vachave nemukana wekusangana nevatungamiri vekusika nekutengesa kubva kumakwikwi uye mararamiro emhando.
Vhidhiyo yose yekutumira inofanirwa kuve yakabvumirana kana yakabudiswa pamitambo pakati peJanuary 1, 2018 uye December 31, 2018. TVA iri kubvuma kutumirwa kuburikidza naJanuary 13, 2019.
Mamwe mashoko pamusoro pezvipo anowanikwa pano. Zvimwe zvinyorwa pamusoro NAB Ratidza New York iri pano.
2016 NAB Ratidza 2016 NAB Ratidza Job Fair 2016 NAB Ratidza Nhau Broadcast Beat Awards Magazini Beat Beat Broadcasters Convention Broadcasting Convention NAB 2015 NAB 2016 NAB Ratidza NAB Ratidza 2016 Nab show careers NAB Ratidza Las Vegas NAB Ratidza Kuregera NAB16 Nabshow National Association of Broadcasters Show Post Post Production Sprockit Ultra HD Forum	2018-10-30
Previous: NAB SHANDISA KUBATSIRA PAPER ZVINOFANZIDZWA NEZVINHU ZVOKUDZIDZISWA NEBADADADZIN ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY CONFERENCE
Zvadaro: Nugen Audio's Halo Upmix Inounza Zvakaipa Zvakaipa Zvawanikwa NeNetflix's, The Haunting of Hill House